“Mustaqbalka Santiago Solari wuxuu ku xiran yahay tartanka Champions League” – Rivaldo – Gool FM
“Mustaqbalka Santiago Solari wuxuu ku xiran yahay tartanka Champions League” – Rivaldo
(Real Madrid) 13 Nof 2018. Halyayga reer Brazil ee Rivaldo ayaa sheegay in mustaqbalka macalinka kooxda Real Madrid ee Santiago Solari uu ku xiran yahay tartanka Champions League.
Hadalka Rivaldo ayaa wuxuu imaanayaa xili ay saraakiisha kooxda Real Madrid ay ku fikirayaan in macalinka reer Argantina ay ka saxiixdaan heshiis gaaraya ilaa iyo 2020, kadib markii uu guul ku soo hogaamiyay 4-tii kulan ee lasoo dhaafay.
Rivaldo ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay: “Afar kulan, afar guul, waa inaan arintaas ugu hambalyeeyaa, lakiin weli waxaan u baahanahay inaan sugno si aan u aragno hadii uu guuleysan karo waqtiyada muhiimka ah ee Champions League, mustaqbalkiisa macalinka Real Madrid waxaa laga yaabaa in halkaas lagu go’aamiyo”.
Intaas kadib wuxuu Rivaldo ka hadlay mustaqbalka xidiga ay isku dalka kasoo wada jeedaan ee Vinícius Júnior wuxuuna yiri:
“Waxay ahayd inuu si joogto ah u ciyaaro tan iyo bilawga xili ciyaareedka, laakiin hadii uu sii joogteeyo qaab ciyaareedkiisa wanaagsan ee haatan uu ka sameenayo kooxda Real Madrid, isla markaana uu Gareth Bale sii joogteeyo hoos u dhaca qaab ciyaareedkiisa, waa hubaal inuu ciyaari doono kulamo badan”.
“Haatan wuxuu fursado badan ka helayaa Santiago Solari, waa ciyaaryahan weyn ee leh shaqsiyad weyn ee gudaha garoonka ah”.
Eden Hazard oo arintan muhiimka ah kaga mahad celiyay Joe Cole
RASMI: Real Madrid oo go'aan kama dambeys ah ka gaartay mustaqbalka Santiago Solari